New Mercedes Coupe C-Class - imoto ukuthi bonke abalandeli Stuttgart imishini ukukhiqizwa sengilinde nge isineke. Futhi ungakwazi uqonde ukuthi kungani! Eqinisweni, imoto zaphumela ezifana nalokho okwakulindeleke ngisho kangcono. Kufanele futhi sikhulume ngazo zonke izinzuzo zayo ngokuningiliziwe.
Kusukela indlela ifana beMercedes Coupe C-Class, singabona ukuthi imoto ngempela ekhululekile futhi beshesha. Iqiniso lokuthi isikhathi-ihlolwe, kuhlanganiswe kahle izixazululo ezintsha. Kulesi ngokuvumelana kudala isithombe esiyingqayizivele, emehlweni lapho kukhona injabulo yeqiniso.
Silhouette yokubukisa, sporty - lokhu iye sibonga ingilazi uhlangothi futhi bakhulise izitho zomzimba, okuyinto ochwepheshe engimbumbile indlela entsha ngokuphelele izuzwe. Nokho, kule uhlobo elibonakalayo S-Class. Ngu olugcwele ezingemuva ikota izinsika engimbumbile "emahlombe" enamandla, kodwa kanjani lo mshini libanzi, waveza kahle flat LED umsila izibani. Ayimkhangi futhi yokukhanya ezintsha entsha Mercedes Coupe C-Class. Four ovundlile LED emapheshana libukeke kakhulu. Futhi okwamanje akunakwenzeka ukuba wazi ohlelweni qeda nge tailpipes ezimbili bafakwe bumper futhi isici umugqa phezu kwezindonga ezisemaceleni. Ngokuvamile, ukuma umzimba uthole ekhululekile kakhulu, sporty futhi bubuhle.
Salon Mercedes Coupe C-Class yakhelwe ukufanisa Ingaphandle. The elingaphakathi ngempumelelo kuyavumelana yizicukuthwane eliphezulu izinto nge umklamo sporty.
Izihlalo anemisila ukwesekwa lateral. Zokulawula, kanye izakhi ezihlukahlukene zokuhlobisa zenziwa ngombala esiliva chromium futhi ikhanga ukunakekelwa okukhethekile -panorama ophahleni nge iphaneli beya. Ngisho ngaphakathi kukhona izibani zangaphakathi, ibekwe ngaphansi imininingwane aliqede. Futhi uzinake iyona ukunakwa ngokushelela egeleza nomunye sidewall labaqaphi elingemuva. Ngokuvamile, isimo gumbi esisha Mercedes Coupe C-Class esiyingqayizivele. Ngaphezu kwalokho, kungaba esiyingqayizivele nakakhulu - uma engicabanga ukuthi angaba yikhasimende ufuna, khona-ke ngendlela oyifisayo ingaphakathi kuzokwenziwa ngcono ngamanye ongakhetha ahlukahlukene kanye nezici.
Imoto yohlobo lwe-Mercedes Coupe C-Class ifakwe izinjini ezahlukene. Ngakho, ngaphansi imodeli hood, eyaziwa ngokuthi i-C180 4-cylinder, lapho imoto eba esiphezulu - 225 ngehora. Amandla 150 hp. Futhi ukusetshenziswa amangalelwe umjikelezo kuhlanganiswe - 5,9-5,3 amalitha per km 100.
okufushane Landelayo - C300, futhi inama iyunithi ephethe umthamo ukusebenza 1.99 cubic cm, 245 "ihhashi", kanye ngesivinini esiphezulu 250 km / h. Flow kulokhu zokhahlamba kusuka amalitha ngamunye amakhilomitha 100 6.3 kuya 6.8.
Inguqulo namandla kakhulu - onobuhle kusukela AMG. Banezinhliziyo V emise 8 cylinder izinjini, omunye elithatha okukhiphayo 476 l. s, kanye nezinye -. 510 l. a. Bobabili izinguqulo ijubane kukhawulwe ngemishini kwirekhodi 250 km / h. Ukusetshenziswa kuba 8,6-8,9 amalitha umjikelezo kuhlanganiswe. Imodeli yokuqala ibizwa ngokuthi i-AMG C63, kanti eyesibili - AMG C63 S.
motors ehlanganisiwe 7-band "umshini" - inguqulo 7G-TRONIC PLUS ukuwudlulisa ngu AMG.
Njengoba ubona, kuba impela enamandla Mercedes Coupe. C photo enamathiselwe ngenhla, kuyacaca ngaphezulu kanye neqiniso lokuthi le moto muhle azikona kuphela, kodwa futhi ngaphandle. Nokho, ngingathanda lokumba isihloko imishini.
Umshini ifakwe ukumiswa enamandla, ifakwe abakhethayo uhlelo Damping AIRMATIC iphakethe kanye namandla okubakhona. imoto Ubuye lockable diff (noma eziqhutshwa ngekhompyutha noma athutha). Enye imoto kwaba ifakwe AMG unyathela amabhuleki uhlelo kahle. Ukuze oda akwazi ukugcina esiyinhlanganisela-Ceramic ingafakwa. Uma umthengi efisa, umshini amasethi ezemidlalo ukumiswa, nokuba oluhambelana yezinyathelo ezintathu ukulungiswa of shock absorbers. Steering kungaba parametric ukhululekile noma sporty.
Car Mercedes Coupe C uthola Izibuyekezo omuhle hhayi kuphela ngoba imoto enhle futhi fast. abanikazi abaningi bezebhizinisi futhi uqaphele level omuhle kakhulu ezokuphepha. Ngempela, imodeli ifakwe izinhlelo ezihlukahlukene ezisiza umshayeli ukuba babhekane ngokuphumelelayo kuphakama izimo eziyingozi.
Kukhona simiso oluhambelana cruise control, ikhanda ukulawula ukukhanya, ipaki ukusiza, ABS, ESP ... Ngisho kokulawulwa esishintshashintshayo "abayizimpumputhe" atholakalayo. Kodwa akugcini lapho. Futhi imoto ifakwe ngemuva umbono ikhamera (ubonisa imigqa asizayo ashukumisayo), ukushayisana ukugwema umsebenzi futhi umshayeli ukukhathala ohlelweni lokuqapha. Njengoba ubona, Mercedes Coupe C ukucaciswa umxhwele kakhulu.
Esinye uhlelo Oku-PHEPHA, yisivikelo mathupha ukuthi abagibeli kanye umshayeli. Airbag (ejwayelekile, ohlangothini, iwindi nedolo ngisho - umshayeli), ahamba ngebhayisikili ukulimala-ekuvimbeleni module - konke lokhu iyatholakala. Ngaphezu kwalokho, abakhiqizi zinakekelwe ukuphepha kulandela ukulimala kungenzeka. Injini sekuqalile off ngokuzenzakalelayo ngemva kwengozi, the supply fuel imisiwe. Ishintsha ngezibani, ukuheha amehlo, futhi yasebenza ukupholisa othomathikhi. futhi iminyango okuzenzakalelayo ivulekile. Futhi-ke, ochwepheshe "Mercedes" ukuthuthukisa ngemihlahlandlela amasevisi wokutakula. Manje, emzimbeni yokubeka has isitikha elikhombisa QR code-kuso abatakuli scan ulwazi kalula futhi kukwenze kube lula umsebenzi, ukuthola ukufinyelela okusheshayo "londoloza kumephu."
izinto zobuchwepheshe obuphambili
Entsha "Mercedes" C-Class - imoto eyingqayizivele. Anakho, ngaphezu kwawo wonke la mazwi angenhla, kukhona inala yezinzuzo. Ngokwesibonelo, kuvela kahle. Chassis nje emangalisayo. Phatha umshini ezinjalo - Kujabulisa ngempela. Ngaphakathi kukhona konke okungahlala kudingeke. uhlelo lomsindo, uhlelo umsindo umsindo ozungezayo, i-DVD izinguquko, navigation, induduzo wefoni, izipikha-HeartnocularsEND_BOLDEND_FONT, izintambo ngoba soxhumanoningi oluchazayo, touch screen ... iphakethe Njengoba imishini ezengeziwe inikezwa AMG Ebusuku, izibuko ezengeziwe, ukukhanyisa ingaphakathi, inketho elisizayo, anti-theft iphakethe, nokuningi ngaphezulu.
Futhi ekugcineni, izindleko. C180 izobiza ruble ayizigidi ezingu 2,51, futhi inguqulo "umdlalo" - ruble ayizigidi ezingu 2.62. C300 imodeli izobiza ruble ayizigidi ezingu 2,95, AMG C63 -. Ruble ayizigidi ezingu-4.8. Futhi ekugcineni, inguqulo eqolo - S C63 - izobiza ruble ayizigidi ezingu 5.3.
Amagilebhisi "Arcadia": izici begazi ayelapha
Indlela ukwenza yezandla kusukela Foam ngezandla zakho